Xirmooyinka taageerada horumarinta Barnaamijka ee DEBIAN 10 | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | | La cusboonaysiiyay 26/05/2020 14:26 | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Qoraalkani waa sii socoshada (qeybta saddexaad) ee Casharrada u heellan DEBIAN GNU / Linux Distro, nooca 10 (Buster), taas oo u adeegta aasaaska kuwa kale oo badan sida MX-Linux 19 (Duckling xun).
Qeybtaan seddexaad waxaan ku tusi doonaa xirmooyinka muhiimka ah (codsiyada) lagu taliyay in la bixiyo waxa lagama maarmaanka ah taageero aasaasiga ah waayo horumarka, tijaabinta iyo fulinta qaar ka mid ah software (codsiyo) ku saabsan quruxdeena weyn ee Distros DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19.
2dii qoraal ee hore taxanahan waa:
Cusboonaysii oo habee MX-Linux 19.0 iyo DEBIAN 10.2 kadib rakibida (Eeg gelitaanka)
DEBIAN 10: Waa maxay xirmooyinka dheeraadka ah ee waxtarka leh kadib rakibidda? (Eeg gelitaanka)
Xusuusnow oo maskaxda ku hay in:
1 Xirmooyinka taageerada horumarinta Barnaamijka
1.1 Taageerada barnaamijyada Java
1.2 Taageerada codsiyada QT5
1.3 Taageerada codsiyada Mining Digital
1.4 Taageerada dalabka websaydhka
Xirmooyinka taageerada horumarinta Barnaamijka
Taageerada barnaamijyada Java
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah iswaafajinta barnaamijyada Java.
Taageerada codsiyada QT5
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah iswaafajinta barnaamijyada lagu dhisay QT5.
Taageerada codsiyada Mining Digital
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah ee dalabka, darawalada iyo maktabadaha lagama maarmaanka u ah rakibidda iyo maaraynta codsiyada Digital Mining Digital.
Ujeeddo: Ku rakib taageerada maktabadda aasaasiga ah barnaamijyada isticmaala maktabadda keydka macluumaadka ee Berkeley v5.3, oo si ballaaran ay u adeegsadaan barnaamijyada casriga ah ee Mining Digital Mining si loo soo uruuriyo ama loo maamulo.
Taageerada dalabka websaydhka
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah ee barnaamijyada websaydhka ee la hagaajiyay ama la jaan qaadi kara Apache2.
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah ee barnaamijyada websaydhka ee la hagaajiyay ama la jaan qaadi kara Nginx.
Ujeeddo: Ku rakib amarka aasaasiga ah iyo taageerada shaqada ee maaraynta Saldhigyada ku saleysan Postgresql.
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah ee codsiyada loogu talagalay maareynta Macluumaadka ku saleysan Postgresql.
Ujeeddo: Ku rakib amarka aasaasiga ah iyo taageerada waxqabadka ee maareynta keydka macluumaadka MySQL.
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah ee maareynta maareynta keydka macluumaadka MySQL.
Ujeeddo: Ku rakib amarka aasaasiga ah iyo taageerada shaqada ee maaraynta Macluumaadka ku saleysan MariaDB.
Ujeeddo: Ku rakib amarka aasaasiga ah iyo taageerada shaqada ee maaraynta barnaamijyada ku saleysan PHP.
Ujeeddo: Ku rakib taageerada aasaasiga ah maktabadaha loogu talagalay maaraynta barnaamijyada ku saleysan PHP.
Ujeeddo: Ku rakib taageerada maktabadda aasaasiga ah ee aan asaliga ahayn maaraynta barnaamijyada ku saleysan PHP.
Ujeeddo: Ku rakib amarka aasaasiga ah iyo taageerada shaqada ee maaraynta barnaamijyada ku saleysan PERL.
Ujeeddo: Ku rakib taageerada maktabadda aasaasiga ah maaraynta barnaamijyada ku saleysan PERL.
Ujeeddo: Ku rakib amarka aasaasiga ah iyo taageerada shaqada ee maaraynta barnaamijyada ku saleysan Python.
Ujeeddo: Ku rakib amarka aasaasiga ah iyo taageerada shaqada ee maaraynta barnaamijyada ku saleysan Python3.
Waxaan rajeyneynaa taas waa "waxtar yar post" oo ku saabsan xirmooyinka muhiimka ah ee loo baahan yahay si loo bixiyo taageerada lagama maarmaanka u ah saxda «instalación y gestión» horumarka barnaamijyada qaarkood, oo ku saabsan Distros «DEBIAN y MX-Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta weyn ee baahinta nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo koraya ee codsiyada iyo wixii loogu talagalay «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Xirmooyinka taageerada horumarinta Software-ka ee DEBIAN 10
I sax haddii aan khaldanahay, laakiin .. debian ahaan, miyaanay ka saarin phpmyadmin keydadka?
iyo si loo rakibo php, uma baahnid inaad sheegto (tusaale ahaan) php7.3, ama php7.3-curl
Ku jawaab Twikzer
Salaan Twikzer! Waad ku mahadsantahay faalladaada. Xaqiiqdii phpmyadmin kuma jirto meelaha wax lagu keydiyo ee DEBIAN 10 (Xasilloon) laakiin waxay ku jirtaa keydadka DEBIAN 11 (Tijaabinta) wixii aan filayo, in xilliyada qaarkood ay ku dari doonaan sida baakadaha kale ee kuwa deggan, laakiin waad awoodi kartaa ama ka tagi kartaa, Si kastaba ha noqotee, taasi waa sababta aan halkaas ugu tagay. Marka laga hadlayo tan labaad, looma baahna, maadaama noocyada hadda jira ee keydka ku jira loogu yeero magacooda guud.
Linux Lite 4.8, beddelka Windows 7 ayaa hadda la heli karaa